Isenzo sokubambisana nokulwa nobugebengu be-Knife U-OPEN INVITE - Element Society
Incwadi evulekile kubaholi bendawo, izombusazwe, izisebenzi zentsha, ochwepheshe, amanyuvesi, izinsizakalo zomphakathi, abantu abasha, umphakathi kanye nanoma ubani ofuna ukuphela kommese ubugebengu emigwaqweni yethu.
Wonke umuntu uyazi ukuthi ubugebengu bommese kuyinkinga enkulu ezweni lonke nasemakhaya, ikakhulukazi ethinta abantu abasha.
Sonke kufanele sihlanganyele ekufezeni umgomo wokuqeda ummese ubugebengu kusuka edolobheni lethu. Kubalulekile ukuthi sonke sixhunyiwe, ngenhlanganiso ebumbene, ngemilayezo ehambelanisiwe kanye nokungenelela okuhambisanayo.
Ithimba lethu e-Element selisebenzisana nabalingani abandakanya amaphoyisa aseNingizimu South and Sheffield Hallam University ukuqhuba uphenyo lokuqala emibonweni yabantu abasha mayelana nobunikazi bommese nobugebengu.
I-batch yokuqala yedatha yokuqala kanye nezibalo zilungele futhi ngizifakile ekugcineni kwaleli bhulogi. Inani labantu abangu-132 abaneminyaka engu-16-17 abahloliwe. Ucwaningo luhlanganisa zonke izindawo zeSheffield. Sithuthukisa usayizi wesampula ezinyangeni ezimbalwa ezilandelayo.
Kukhona cishe abantu abane-30 (abaneminyaka engu-16 kuya ku-18) abafuna ukuhileleka emkhankasweni wokuvimbela ubugebengu bommese. Laba bantu abasha baye bahlola okuqukethwe kwevidyo futhi bavakashele imibono. Sizobe sesine-workshop yezobugebengu yamahhala etholakala ezikoleni nakwabanye othisha eSheffield.
Kunezinye izingxoxo eziningi mayelana nokwenza ubugebengu bommese okwenzeka emzini. Sithanda ukuletha lezi zingxoxo ndawonye ukuze senze isinyathelo esiphumelele ngangokunokwenzeka ekunciphiseni umthelela weso lobugebengu bommese kanye nokusetha uhlelo oluhle ngekusasa.
Umngane wami u-Will Earp (will.e@elementsociety.co.uk / 0114 2999 210) uhola ukusebenzisana kwethu nabalingani bamanje.
Sicela ungene ku-touch uma ungathanda ukuhlanganyela engxoxweni yeqembu, noma uzoza ukukhuluma nami kanye no-Will.
Zizwa ukhululekile ukudlulisela le bhulogi kunoma ubani okholwayo kufanele abe ingxenye yengxoxo.
Okutholwa kuqala * Okutholakele kwe-Survey (n = 132) Kubantu abasha abacwaningwa:
U-90% wabantu abathwele ummese banezontanga ezithwala imimese
I-43% ethwala ummese ihlala ku-S6 noma i-S7
I-52% eyathwala ummese yayiyi-White British
I-73% ikholelwa ukuthi abantu bathwala imimese ukuze bavikele, bazizwa bengaphephile
I-16% ikholelwa ukuthi abantu bayathwala imimese ngenxa yomsebenzi ohlobene nezigelekeqe
I-15% ikholelwa ukuthi abantu bayathwala imimese ngokuphathelene nesidingo senhlalakahle (kubhekwe njenge'pholile 'yontanga.)
U-57% wabahlanganyeli uthe ubugebengu bommese buvela ngenxa yomsebenzi ohambisana nezigameko, noma ukuphikisana / ukuxabana phakathi kwamaqembu
U-67% walabo ababika ukuthi baphathe ummese, baphendula ukuthi abantu baphatha imimese ukuze bavikele, futhi i-63% yaphendula ukuthi ubugebengu bomkhwa kwenzeka ngenxa yomsebenzi ohlobene neqembu
(ngokufaka leyo ntsha bazizwa sengathi kufanele baphathe ummese ezindaweni ezihlobene nezigebengu ukuze bazivikele)
* lokhu kuyichungechunge oluqhubekayo futhi lezi zibalo zivela esampula sokuqala sabantu abasha be-132, kusuka eSheffield, eneminyaka engu-16-17, eqoqwe ngoJulayi no-Agasti 2018.